အိမ် - လုံးချင်း၂ ထပ်အိမ် အငှား Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: လုံးချင်း၂ ထပ်အိမ် အငှား
မဂ်လာပါ 🙏🙏🙏 ငွေဆောင် အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းမှ လုံးချင်း၂ ထပ်အိမ် အငှားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပါရစေ။ 🏘️ သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက် 🏘️ ဝေဇယန္တာလမ်း/ပြည်သာယာလမ်းအနီး 🏘️ အကျယ်အဝန်း(20'_60'),2- BN. 🌈 3Bedroom,ရေချိုးခန်း၊အိမ်သာ အပေါ်/အောက် 💯 ရပ်ကွက်သန့်၊လမ်းသန့်၊နေရာကောင်း။ 💯 ဈေးနှုန်း-3.5L 09 752757547. 09 778969226. 09 250998522.